भूकम्पीय सुरक्षा विशेष : २१औं भूकम्प सुरक्षा दिवस मनाइँदै
‘विपद्बाट सुरक्षित हुने नागरिक अधिकार पूरा गर्न जिम्मेवार संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार’ नाराका साथ बुधवार २१औं भूकम्प सुरक्षा दिवस मनाइँदै छ । विपद् जोखिमको विश्वव्यापी प्रतिवेदनका अनुसार नेपाल भूकम्पको जोखिममा रहेका मुलुकमध्ये ११औं स्थानमा पर्दछ । भूकम्पीय जोखिमको मूल्यांकन नगरी घर, भवन लगायत संरचन...
सामाजिक सुरक्षा कोषले कसरी काम गर्छ ?
सामाजिक सुरक्षा योजना नेपालका लागि नयाँ अभ्यास हो । श्रमिक र रोजगारदाताबीच असल सम्बन्ध कायम राख्दै रोजगारमैत्री वातावरण निर्माण गर्न यो योजना लागू गरिएको हो । यसले सबै किसिमका श्रमिक, कामदार र कर्मचारीलाई पेन्सन प्रणालीमा लैजान्छ । रोजगारमैत्री वातावरणका लागि श्रमको हक, श्रमिकको सामाजिक सुरक्षा र...
सूचीकरण कसरी गर्ने ?
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना अन्तर्गत सामाजिक सुरक्षा कोषमा चरणबद्ध रूपमा देशभरबाट रोजगारदाता र श्रमिकको सूचीकरण हुनेछ । यस क्रममा सर्वप्रथम मङ्सिर ६ गतेदेखि काठमाडौं र प्रदेश ३ भित्रका रोजगारदाताको सूचीकरण शुरू भएको छ । हालसम्म करीब ४ सय ५० रोजगारदाता सूचीकरणमा आबद्ध भइसकेको सामाजिक सुरक्ष...
नेपालमा सामाजिक सुरक्षा हिजोदेखि आजसम्म
नेपालमा सामाजिक सुरक्षाको अवधारणा निकै पहिलेदेखि शुरू भएको हो । १९९१ सालमा सैनिकहरूको सेवानिवृत्त जीवनमा आर्थिक सहयोग पुर्‍याउन ‘सैनिक द्रव्य कोष’को स्थापनाबाट सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था प्रारम्भ भएको इतिहास छ । २००१ सालमा ‘निजामती प्रोभिडेन्ट फन्ड’को व्यवस्था गरी सेवाबाट निवृत्त भएपछि निजामती कर्म...
२ अर्ब २२ करोड रुपैयाँको अन्योल
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी ऐन–२०७४ जारी भएपछि २०६६–६७ देखि कामदारबाट संकलन गरिँदै आएको १ प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा करको २ खर्ब २२ करोड रुपैयाँ के हुन्छ भन्ने अन्योल देखिएको छ । अर्थ मन्त्रालय स्रोतले सो कर यथावत् संकलन गरिने र त्यसको रकम सो करमा योगदान नगर्ने तर सामाजिक सुरक्षाको सूचीमा...
भडकिलो प्रचार र आलोचना
ठूलो तामझाम र भड्किलो प्रचारका साथ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७५ मङ्सिर ११ गते सामाजिक सुरक्षा योजनाको उद्घाटन गरेपछि सरकारले यसलाई ‘नयाँ युगको शुरुआत’को संज्ञा दियो । सामाजिक सुरक्षाको अवधारणा २०५१ सालमा आफ्नै पार्टीले शुरू गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले यो योजना आफ्नै सरकारको पालामा कार्...
आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा जोखिममा रहेका नागरिकलाई संरक्षण गर्नु राज्यको मूल दायित्व हो । संविधानको धारा ३४ मा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको हकलाई श्रमिकहरूको मौलिक हकको रूपमा उल्लेख गरिएको छ । आर्थिक रूपले विपन्न, अशक्त र असहाय अवस्थामा रहेका, असहाय एकल महिला, अपांगता भएका, बालबालिका, आफ्नो हे...
कस्ता श्रमिक लाभान्वित हुन्छन् ?
सरकारले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम ल्याउने भएपछि आम श्रमिकमा खुशीसँगै अन्योल देखिएको छ । अब कर्मचारी सञ्चय कोषमा रकम जम्मा गर्न मिल्छ कि मिल्दैन, त्यहाँ जम्मा भएको रकम के हुन्छ भन्ने उनीहरूको अन्योल हो । सरकारले निजीक्षेत्रका श्रमिकलाई पनि पेन्सन योजनामा लैजाने उद्देश्यले यो कार्यक...
वर्षभर सबै दिन उस्तै हुन्छन् । घण्टा, दिन, महिना र ऋतु फेरिए जस्तै वर्ष पनि फेरिन्छन् । यस क्रममा १ दिनमा त्यति ठूलो परिवर्तन केही हुँदैन । तर पनि हामीले पात्रो अनुसार नयाँ वर्षको पहिलो दिनलाई विशेष उत्साहका साथ मनाउने गरेका छौं । हाम्रो आधिकारिक पात्रो विक्रम संवत् अनुसार वर्षको पहिलो दिन वैशाख १ ह...
ग्रेगोरियन पात्रोअनुसार मंगलवारदेखि नयाँ वर्ष इश्वी सन् २०१९ शुरू भएको छ । जिसस क्राइष्टलाई यातना दिएर मारिएपछि इश्वी संवत् मनाउन थालिएको हो । ग्रेगोरी पात्रो इश्वी संवत्मा आधारित छ । यो संसारका सबैजसो ठाउँमा प्रयोग गरिन्छ । यो जुलियन पात्रोको रूपान्तरण हो । पोप ग्रेगोरीले जुलियन पात्रोअनुसारक...